ရာဇဝင်များရဲ့သတို့သမီး Vs အောင်သိန်းလင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရာဇဝင်များရဲ့သတို့သမီး Vs အောင်သိန်းလင်း
ရာဇဝင်များရဲ့သတို့သမီး Vs အောင်သိန်းလင်း
Posted by ဦးသု on Jul 23, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
အခုတင်ပြမှာကတော့ ဦးအောင်သိန်းလင်း က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် southern weekend သတင်းစာနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ပြောသွားတာတွေပါ www.burmanet.org မှာ English လို ဖော်ပြထားပါတယ်
ဒါဟာသူ့ (သမတ)ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ပါ။လွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆန့်ကျင်ပါတယ် ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေးမူဝါဒ မဟုတ်ပါဘူး။သမတ ဟာ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကိုပျက်ပြားအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆောက်ကိုဆောက်ရမယ် ။ကျွန်တော်တို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုတယ် အနောက်နိုင်ငံတွေက ဒါကိုရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့ တရုတ်နဲ့ မြန်မာ ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားအောင်လုပ်ခဲ့တာပါ
ကျွန်တော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလဲမယုံဘူး ကုလသမဂကိုလဲမယုံဘူး။
ဟီလာရီ ကလင်တန်လာတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအမျိုးသမီး(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)အတွက်လာတာ။
နောက်ပြီး EU နှင့် US အား
သူတို့ကိုမယုံဘူး ။သူတို့က သူတို့လိုချင်တဲ့ ရုပ်သေးအစိုးရတင်ဖို့ ဂိုဏ်းဖွဲ့နေတာ
နောက်ပြီး NLD အား
လူတွေက ရူးနေကြတာ ။ သူက လူကြိုက်များတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့သမီး ဖြစ်နေလို့ပါ
ထို့အပြင် အောင်သိန်းလင်း သည် ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၁ အထိရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ရာတွင် ပါတီငွေကြေးနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ငွေကြေးများ ကို ရောထွေးသုံးစွဲခဲ့သည်ဟုဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
အရူးပြောစကား အရူးဘဲနားထောင်။စကားထဲထည့်ပြောစရာတောင်မလိုဘူး..အောင်သိန်းလင်း ကျပ်မပြည့်
( လူတွေက ရူးနေကြတာ ) ဆိုတော့ ကျုပ်ဘာ ပါသွားတယ်
ဟုတ်ဒယ် ဒို့ရွာထဲဂ စယ်လီဗျယ်လီ ဘိုဂျုတ်မူးဂျီး ကိုပါဆွဲစိသလိုဖစ်တွားဒယ်
ကျွန်တော်တို့ လျှပ်စစ်အားလိုတယ်၊ တရုတ်က သိပ်ကူညီချင်နေတယ်ဆိုလဲ ထွက်လာတဲ့ဓါတ်အားကို အနဲဆုံး ၈၀% ရအောင်တောင်းလေ၊ ဒါတောင် ဆုံးရှူံးပျက်စီးရတာနဲ့ကာမိပါ့မလား၊
သူတို့လိုအပ်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ သယံဇာတနဲ့လာရှာတာပဲ၊ အနှစ်၃၀၊၅၀ ကျရင် အပိုင်ရမှာတော့ မတွေးနဲ့၊ဂျုံးဂျုံးကျနေပြီ၊
ကျွန်တော့ဆီမှာ ၁၉၆၉က အမေရိကန် GE ကထုတ်တဲ့ မော်တာ ပန့် အခုထိသုံးနေတုံး၊ ငြိမ်နေတာပဲ၊
ဘာလို့ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းထဲတောင်းတာလည်း.. :?
၁၂၀% လောက်တောင်းပေါ့..။ ငွေလည်းပေး.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံတာလည်းလုပ်.. လျှပ်စစ်လည်းပေး.. အကုန်ပေး.. မကောင်းလား…
“ကျွန်တော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလဲမယုံဘူး ကုလသမဂကိုလဲမယုံဘူး။ ”
ကျွန်တော့မိန်းမကိုလဲမယုံဘူး … ကျွန်တော့ကိုကျွန်တော်လဲမယုံဘူး (စောက်တလွဲတွေလုပ်တပ်လွန်းလို့)
ဟီး ဒီကောင့်အစား ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်
ကျုပ်က ထပ်ဖြည့်ပေးအုန်းမယ်… အဲဒီလူ
သူမိန်းမ ကို မယုံတာ ခေါ်တောတစ်ကျိပ်နဲ့နောက်မီးလင်းလို့ 
သူ့ ကို သူ မယုံတာက တွေ့ သမျှ လူအဖေခေါ်ရလွန်းလို့သူ့ အမေ ခံနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ သံသယဖြစ်သွားလို့ 
ဟဲဟဲ .. ကိုပေ ထပ်ဖြည့်မှပဲ ပိုပြီးပြည့်စုံသွားတော့တယ်။ ကျေးဇူး … :-)
တဂျီး တားကို တူက အရူး တဲ့
ဒီလောက် သဘောကောင်း မနောကောင်းကြီးကိုတွယ်နေလိုက်ကြတာကြည့်ပါဦး
သူ့ခမျာ မီးမှန်ဖို့စေတနာနဲ့ လုပ်နေရှာတာပါအေ ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်
( EU နှင့် US အား သူတို့ကိုမယုံဘူး ။
သူတို့က သူတို့လိုချင်တဲ့ ရုပ်သေးအစိုးရတင်ဖို့ ဂိုဏ်းဖွဲ့နေတာ)..ဆိုလို့…………….
ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတာ ထင်တိုင်းကြဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူး အရူးရဲ့……
နင်တို့ကသာ တရုတ်လုပ်သမျှ ခံ တရုတ်ပေးတဲ့နှစ်ပြားတပဲကိုယူ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဆိုးအစိုးရတွေကိုသာအားပေးတတ်တဲ့ တရုတ် လိုနိုင်ငံမျိုးကလဲ..
ဦးနှောက်မရှိတဲ့တရုတ်က အရူးစကားအဟုတ်ထင်ပြီး တရုတ်ထုတ်southern weekend
ယောကျာ်းကြီးတန်မဲ့ အတော် မူယာမာယာများတဲ့ ဘဲကြီးကိုပြပါဆိုလျှင် သူနဲ့ ဟိုဂျပုနဲ့က ထိပ်တန်း စာရင်းဝင်တဲ့ … ။ အရိုးဝါးရင်းအသံထွက်လာတော့လည်း ဗလံုးဗထွေးပဲဖြစ်မှာပေါ့ ။
ဟိုလူ့ကိုပုတ်ခတ် ၊ ဒီလူ့ကို ပုတ်ခတ်နဲ့ … ကိုယ့်အိတ်ကပ်ထဲ ငွေရောက်ဖို့ပဲ တွေးနေတဲ့ လူတွေ ….. စောင့်ကြည့်ပါ … ဇာတ်သိမ်းလှလျှင်တောင် ကံကောင်းပါစေဦး ။
ဦးအောင်သိန်းလင်း ကိုနောက်သက်တမ်းအတွက် သမတ တင်ပေးလျင်ကောင်းမည်လား၊
အခုလောလောဆယ် လွတ်နေတဲ့ ဒုသမတ တင်ပေးလျင်ကောင်းမည်လား၊
ကျုပ်အထင် သူက တရုတ်က အင်တာဗျူးမို့လို့ တရုတ်အကြိုက်စကားတွေရှောက်ပြောတယ်ထင်တယ်
နီးစပ်ရာကို ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် ဖါးနေ အကြိုက်တွေပြောနေရတာ အကျင့်ပါနေလို့ထင်တယ်..
သူ့ရဲ့ဦးဏှောက်ကလဲ ဒီလောက်ပဲရှိတာကိုး…သူတို့လောကမှာ ရာထူးဂုဏ်ထူးတွေရတယ်ဆိုတာ လုပ်ဆောင်မူကောင်းလွန်းလို့ တော်လွန်းလို့မှမဟုတ်ပဲ အထက်လူကြီးကိုဖါးနေ အကြိုက်လုပ်ပေးနေရင် နေရာကောင်းတွေရလာတာဘဲလေ…စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ လူကြီးရာထူးရထားတဲ့လူ ဘယ်သူရှိသေးလို့လဲ…မြန်မာကွ..လို့ထအော်တဲ့ ဦးခင်ညွန့်တောင် ၁ခါလေး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျပါတယ် ပြန်လွှတ်လာတော့ နှိင်ငံရေးမလုပ်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတာကိုကြည့်.
သူသာ ကိုယ့်နှိင်ငံ ကိုယ်တကယ်ချစ်ရင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ၁ယောက်အနေနဲ့ ဒီခေတ်ထဲမှာ ပါတီဘဲထောင်ထောင် ဘယ်လိုနေရာကဘဲဖြစ်ဖြစ် နှိင်ငံအတွက် ၀င်လုပ်ရမှာပေါ့…အခုလက်ရှိ နေရာယူထားသူတွေလဲ မယုံရင် ၁ခါလောက် ထောင်ချကြည့်လိုက် …သာလို့ ချောင်လို့ လုပ်နေသူတွေချည်းပါဘဲ….ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း ကတော့ မထင် ရေးချ မထင်…
သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရသစ် ဖွဲ့မယ်ဆိုရင် .. အဲ့ဒီ သူတောင်းစား ခွေးသူခိုး.. ပြည်သူ့မေတ္တာတုံး တွေကို အစိုးရအဖွဲ့က အရင်ဆုံးထုတ်ပစ်ဖို့လို့တယ်..
ချီးထုတ် နဲ့ အိမ်ကို အပစ်ခံရတဲ့ အောင်သိန်းလင်း
“မ” ပြောင်းဖူးကြီးကိုင်ပြီး မဲဆွယ်တဲ့အောင်သိန်းလင်း
သူ့ကိုယ်စွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် စောင်မနေပါဘီ….
အင်းးးဗျ အရက်မူးလွန်သွားပြီးပြောတယ်ဆိုရင်လဲသောက်တာ ဘီအီး